U-Edson Glauber -Ubuntu buza kushukunyiswa kungekudala ziziganeko eziKhulu- ukubala ukuya eBukumkanini
U-Edson Glauber -UHumanity Uza kugungqiswa kungekudala ngeziganeko ezikhulu
Imiyalezo yakutshanje ukuya Edson Glauber :
Isuka kwiNtsapho eNgcwele, nge-19 kaJulayi ngo-2020
Nyana wam, uze ubakhumbuze ngale nto, ukuze bangenakuchaphazeleka: nabani na ongayikhathaleli eyakhe, ngakumbi abo bosapho bakhe, ulukreqo, mbi ngaphezu kongakholwayo. (I-1 U-Timothy 5: 7,8)
Sifuna ukuphilisa iintsapho zakho, sifuna ukukukhulula kulo lonke usizi, kuyo yonke ingcinezelo, kuko konke ukungabikho koxolo, ukuxolelwa nothando.
Sivumele ukuba silawule ezindlwini zakho kwaye uyakufumana iintsikelelo nobungangamsha boThixo uBawo, othe ngathi wasolulela ingalo yakhe eyomeleleyo yokukhusela phezu kwakho konke. Zinyamekele iintsapho zakho ngomthandazo, ngokuzincama, ngokuguquka, kwaye ubabalo luya kuza lutshintshe ubomi bakho.
Siyakusikelela: egameni loYise, lo Nyana noMoya. Amen!
Intsapho eNgcwele (uYesu, uMariya noJosefu bathetha lo myalezo kunye)
Ukusuka kwiNkosikazi yeRosary kunye noXolo, nge-18 kaJulayi ngo-2020
Nyana wam, la ngamaxesha obumnyama, ixesha lokuphanziswa okukhulu. Usathana usebenzisa abalandeli bakhe ukuhlasela ukholo nabantwana bam, kunye nokutshabalalisa indlu kaThixo. Iicawa ezininzi kunye ne-arhente ziyatshatyalaliswa, zitshiswe, ziphange, kwaye akukho lizwi lokuzikhusela kwimbonakalo yomsindo nobungangamsha bukaThixo, kodwa bathule abo bafuna ukufihla iinjongo zabo ezimbi kunye nengabonakaliyo.
Abo banokuzigweba izenzo ezinjalo bathule kwaye bayashia, kuba uninzi lwabo luyahambelana nazo zonke ezi zinto zinxaxhileyo zichasene neNkosi kunye neCawe yakhe eNgcwele. Akusekho kuphinda kuthembeke, ukuthobela kunye nokukhuthala ngendlu yeNkosi njengoko kubhaliwe eLizwini lakhe: "Ukuzondelela indlu yakho kundidlile. (Iindumiso 69: 9) ”. Ngokuchasene noko, indlu yeNkosi iye yaba ngumhadi wamasela ( Mateyu 21, 13 ).
Niphathe ngononophelo, bantwana bam! INkosi iyayiqonda yonke le nto. (Yer 7:11) Vuka! Sukuvuma ukukhohliswa ziimpazamo zikaSathana kunye nokulukuhla kwakhe. Awuyi kuthatha nto kweli hlabathi uhamba nayo: yonke into iya kushiyeka ityiwe kwaye ichithwe ngamabhu kunye nomhlwa. “Ubutyebi benu buyabola ngoku kwaye iimpahla zenu zobunewunewu ziba ngamadlavu atshiswe ngamanundu. Igolide nesilivere yakho irusi, kwaye oku kuya kuba bubungqina ngokuchasene nani, kwaye iya kuyidla inyama yenu njengomlilo. Niziqwebele ubutyebi kule mihla yokugqibela. ” (UJames 5: 3)
I-mercenary, engenguye umalusi eziye iigusha zayo, ibona ingcuka isondela, ishiye igusha ibaleke. Emva koko ingcuka ibabambe ize iwusasaze umhlambi. I-mercenary ibaleke, kuba iyindalo kwaye ayinenzondelelo kwizimvu. (UYohane 10: 12-13) Namhlanje i-mercenary iphakathi kweNdlu kaThixo kwaye ithe cwaka; Akathethi ngazwi egameni leNkosi, eluzuko lwayo, ekukhuseleni ukholo kunye nezimvu, kodwa uvula nje umlomo wakhe ukuze athethe inyeliso kunye neziphoso. Ngomlomo uthile oya kuthi tu, uthe tye ubuxoki, ubuye ubugqwetha. Ngokuhambelana nolwimi lweVangeli, isinye apha sisetyenziselwa ukuchaza “le nenceba, ”nangona uninzi lwabantu abanjalo kubhekiswa kubo ngale nto, ebayala bonke njengeqela elinye. Qaphela, ngokunjalo, isicatshulwa esidumileyo esasinikwa uPopu St. Paul VI malunga "nomsi kaSathana" ongena eCaweni, kunye nomxholo ongaguquguqukiyo ofunyenwe kwisityhilelo sangasese esinyanisekileyo sanamhlanje sokuba uninzi lolawulo lonakele. Isiprofeto sikaVenerable Fulton Sheen, esibonisa ukuba "uSathana uza kugaya [uMprofeti Obuxoki] koobhishophu bethu." Kufuneka kukhunjulwe kwakhona, ukusuka kwiSityhilelo 13: 5, ukuba uMprofeti wobuxoki uza kulawula iminyaka emi-3 nesiqingatha kuphela.
Itsho iNgangalala uNdikhoyo ukuthi: “Niya kuvutha ngumsindo, ndinitshabalalise ngekrele! (Eks 22: 24). Guqula, Guqula, Guqula! Buyela kuThixo ngentliziyo eguqukayo kwaye uya kukunika ukuxolelwa nenceba.
Ndiyakusikelela: egameni loYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele. Amen!
Ukusuka kwiNkosikazi yeRosary kunye noXolo, nge-12 kaJulayi ngo-2020
Nyana wam, namhlanje sisikelela iintsapho zakho kwaye sikunika izithamsanqa ezintle, iintsikelelo kunye nezipho zasezulwini ongenakuze uzicinge, kuba uthando lukaThixo luzenza lube namandla ebomini bakho namhlanje, kuba ufuna ukukubona wonwabile, simahla wabo bonke ububi, ehleli eluxolweni naseluthandweni lobuthixo.
Kholelwa kwisenzo sikaThixo kubomi bakho namhlanje, kwaye uya kulizukisa kwaye ulidumise igama lakhe elingcwele ngonaphakade kanaphakade.
Ukusuka kwiNkosikazi yeRosary kunye noXolo, nge-11 kaJulayi ngo-2020
Nyana wam, uninzi lwabantwana bam bafa ebumnyameni nakwisono, kuba abalwazi uthando lo Nyana wam uYesu. Amadoda akasacingi ngotyekelo lwazo olupheleleyo kwaye azivumele ukuba zimfanyekiswe nguSathana obakhohlisayo, afuna ukuqwenga imiphefumlo yabo ngokukhawuleza.
Xelela abantakwenu noodade ngothando loNyana wam, ukuze baqonde esona sizathu sobukho babo, abadalelwe sona: umfanekiso kunye nomfanekiselo kaThixo, okwaziyo ukumazi, ukumthanda nokumonwabela ngonaphakade Ngcwaliswa luthando lwakhe olungcwele.
Ubuntu buza kugungqiswa kungekudala ngeziganeko ezikhulu, kwaye zonke iintshukumo ezimbi nobukumkani bezono ziya kutshatyalaliswa ngesenzo sikaThixo nobulungisa. Akukho nto iya kusala imile!
Thandaza, thandaza kakhulu, kwaye ngale ndlela uyakube unceda uMama wakho waseZulwini ukuba asindise imiphefumlo emininzi kumakhamandela kaSathana, ubakhokele kwindlela engcwele ekhokelela kuzuko lwezulu.
Ngokuhambelana nolwimi lweVangeli, isinye apha sisetyenziselwa ukuchaza “le nenceba, ”nangona uninzi lwabantu abanjalo kubhekiswa kubo ngale nto, ebayala bonke njengeqela elinye. Qaphela, ngokunjalo, isicatshulwa esidumileyo esasinikwa uPopu St. Paul VI malunga "nomsi kaSathana" ongena eCaweni, kunye nomxholo ongaguquguqukiyo ofunyenwe kwisityhilelo sangasese esinyanisekileyo sanamhlanje sokuba uninzi lolawulo lonakele. Isiprofeto sikaVenerable Fulton Sheen, esibonisa ukuba "uSathana uza kugaya [uMprofeti Obuxoki] koobhishophu bethu." Kufuneka kukhunjulwe kwakhona, ukusuka kwiSityhilelo 13: 5, ukuba uMprofeti wobuxoki uza kulawula iminyaka emi-3 nesiqingatha kuphela.
← UGisella Cardia - Oyena mntu…
Iintsuku ezintathu zobumnyama →